कार्यक्रममा ओली र रावलबीच खासखुस गर्दै ! - ramechhapkhabar.com
कार्यक्रममा ओली र रावलबीच खासखुस गर्दै !
नेकपा (एमाले)का नवनियुक्त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बाले अध्यक्ष ओलीलाईं शपथग्रहण गराउनुभएको हो । अध्यक्षको शपथग्रहण गरेसँगै ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई शपथग्रहण गराउनुभयो ।
चितवनमा सौराहमा बसेको एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले १९ पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य चयन भएका छन् ।
एमाले कार्यकर्तालाई ओलीले भने– नेताजस्तै बन्नुस्, दम्भ, घमण्ड र अहंकार नदेखाउनुस्
नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दशौं महाधिवेशनमा सहभागी एमाले कार्यकर्ताहरुलाई ‘नेता जस्तै बन्न’ आग्रह गरेका छन्। नवनिर्वाचित अध्यक्षको पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएर एमालेका निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सपथ गराएपछि ओलीले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
‘कमरेडहरु, हाम्रा आनीबानी र व्यवहार नेता झैं हुनुपर्छ। व्यवहार शालीन हुनुपर्छ, विनम्रताका साथ अरुलाई व्यवहार गर्नुपर्छ’, एमाले महाधिवेशनको बन्दसत्र हलमा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘कुनै नेता घमण्डी र अहंकारी हुँदैन। अहंकारी व्यक्ति नेता हुँदैन, नेता अहंकारी हुँदैन।’
ओलीले घमण्ड, दम्भ र अहंकार देखाउनै नमिल्ने बताए। ‘हामी जनताका सेवक हौं, विनम्रताका साथ जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘परस्परमा विद्वेष प्रयोग गर्ने कुराबाट हामी जोगिनुपर्छ। एकअर्काप्रति सम्मान, सहिष्णु र आदरभावपूर्वक व्यवहार गर्नुस्।’